www.kidmachine.com | Malunga
Umatshini waseVictor Fama zikwesiXeko saseZhengzhou yakudala esinegama elihle lobuchwephesha kwidolophu yase China. Besibandakanyeke kushishino loomatshini beefama njengomatshini wokutyala umbona,ukubhula kwengqolowa umatshini,umatshini wokuxhuma umbona,seed drill for corn,ingqolowa,isoya,kunye nesandla sokutyala imbewu ngeminyaka elishumi. Zeziphi zisetyenziswa ngokubanzi kwincinci,umhlaba wokulima naphakathi kwelenza inkonzo enkulu, Umgangatho ophezulu, Amaxabiso okhuphiswano, Ukuhanjiswa kwangexesha yintanda-bulumko yethu, sisebenzisana ngokupheleleyo kwisiseko sokulingana kunye nokuxhamla ngokuxhamla kunye namaqabane.
Sinethemba lokunyaniseka ukuba uza kuba ngumxhasi wakho wegolide kunye neqabane lakho kwicandelo lokufuya ngombona,Umatshini wokubhula iinkozo,kunye nezinye iimveliso. Ngezixhobo zokusebenza zesiseko sobugcisa kunye neqela labachwephesha abanamava, kunye nabasebenzi abanobuchule, siqinisekisa ukubonelela ngeemveliso eziphezulu eziphezulu ngamaxabiso aphezulu okhuphiswano ubuncinci ngexesha elikhokelayo. Ukulandela ezi zinto zinqwenelekayo zeshishini; Inkampani ineempahla ezizezayo ezivela kubathengi bayo kwihlabathi liphela.
Sinoluhlu olupheleleyo nolona lungcono lwenkonzo engaphambi kokuthengisa, inkonzo yentengiso kunye nenkonzo yokuthengisa emva kokuqinisekisa ukuhamba kwayo yonke inkqubo.ifunawo nawuphi na umbuzo, Unganxibelelana nobugcisa bethu okanye umthengisi malunga nokubonisana malunga nesherali yethu yengqolowa,umthungi wombona,corn seed drill and other products.we are at your service at any time.
1.Inkampani yethu ikhangela indawo ekhusela ingqolowa,Umatshini wokubhula iinkozo,ukuqhuqha imbewu yembewu,kunye nezinye iimveliso ,kunye nenkonzo elungileyo. Siye samisela i-cala-yonke ngaphambi nangasemva kwenkonzo yentengiso.
2. Inkxaso yethu kunye nenkonzo iqhubeka kakuhle emva kokuba oomatshini befika kuwe ekusebenziseni ngenkonzo ezinikezelweyo emva kwentengiso.
3.Sizinikela ngokupheleleyo ekunikezelweni kwexesha kunye neyona nkonzo intle kwimveliso nganye. kunjalo, Uphuculo oluqhubekayo kwiinkonzo kunye nomgangatho wethu luxanduva lwethu olukhulu lomsebenzi ngamnye kwinkampani yethu.
Umzimba ophambili womatshini uqinisekiselwe unyaka omnye ngaphandle kwecandelo elinxibe lula. Ngaphandle kwezizathu ezenziwe ngumntu azikho phakathi kokucwangciswa kwewaranti. Nangona kunjalo sinokukuqinisekisa ukuba silandela umgangatho ophezulu wokuvelisa kunye neemveliso ezifanelekileyo, kwaye zonke iimveliso zethu zigqithile isiqinisekiso senkqubo esemgangathweni.
Nguwuphi umgaqo esiwunyanzelayo?
A.quality kuqala,umxhasi kuqala, inkonzo kuqala
B.ISO9001–ukusebenza kakuhle kunye nemithombo yokuxhamla
C.Ulwakho,umgangatho wam,iqabane elilungileyo,sonke siyafuna
ukuthengisela ukungcola komhlaba
njengomvelisi ofanelekileyo,ngokuthe ngqo sithengisa oomatshini bethu kulo lonke ihlabathi,Ukuphelisa umlinganiswa,ukwenza lula inkqubo,njengomvelisi sidibana ngokuthe ngqo nomthengi ukuze siqonde amaxabiso awodwa akhethekayo kumzi-mveliso.